के हुँदैछ ३८ क्विन्टल सुन काण्डको मुद्दा ? मुद्दाको किनारा लगाउन सर्वोच्चको यस्तो तयारी – Himshikharnews.com
के हुँदैछ ३८ क्विन्टल सुन काण्डको मुद्दा ? मुद्दाको किनारा लगाउन सर्वोच्चको यस्तो तयारी
२३ असार २०७६, सोमबार १६:५३
काठमाडौ । ३८ क्विन्टल सुन काण्डका मुख्य आरोपीसहित २९ जनाको पेसी सर्वोच्च अदालतको हेर्दाहेर्दैमा सोमबारका लागि तोकिएको छ ।
पक्ष र सरकारी वकिलहरुको बहस नसिकएपछि सर्वोच्चले सोमबारलाई पेसी तोकेको हो। बिहीबारदेखि चलेको सुनुवाइलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर सर्वोच्चले किनारा गर्न खोजेको छ।
जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझेका २९ प्रतिवादीको मुद्दा एकैठाउँ राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै आएको छ। सर्वोच्चमा केही महिनादेखि इजलास चहारिरहेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र शुष्मालता माथेमाको इजलासले बिहीबारदेखि सुनुवाइ गर्दै आएको छ।
करिब डेढ महिना लामो अनुसन्धानपछि गत बैसाख २६ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बहालवाला प्रहरी अधिकृतसहित २९ जनालाई पक्राउ गरी अदालतमा पेस गरेको थियो। उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराधअन्तर्गत आपराधिक समूह स्थापना गरी सुन चोरीपैठारी गरेको, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाएको र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आरोपपत्र दायर भएको थियो।bikastimes bata